Chelsea 4-2 Stoke: Blues oo jabiyay rikoorkii Arsenal ee Premi... | Universal Somali TV
Chelsea 4-2 Stoke: Blues oo jabiyay rikoorkii Arsenal ee Premier League ka dib markii guusheedii 13-Aad oo xidhiidh ah ka gaadhay Stoke City
December 31 2016 20:57:23
Chelsea ayaa jabiyay rikoorkii Arsenal ee kulamada isku xiga Premier League ay ku guuleystaan xilli ciyaareedka iyagoo 4-2 kaga badiyay Stoke habeenka sanadka cusub soo galayo.
Blues ayaa haatan ku guuleysatay 13 kulan oo isku xigta - oo la mid ah rikoorkii kooxda Gunners ee xilli ciyaareedkii 2001/02 - islamarkaana hogaanka qabtay ka dib markii 30 daqiiqo ciyaarta socotay oo madax uu ku dhaliyay Gary Cahill .
Laakiin Bruno Martins Indi ayaa dhaliyay goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa xilli ciyaareedkaan kaliya 54 ilbiriqsi ka dib marki la isku soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta kaasoo barbareeyay Stoke, ka hor inta Willian uu dhalin goolkii ugu horeysay ee labo gool oo toban daqiiqo ka dib Blues ay hogaanka markale ku qabatay.
Ciyaarta ayaa xaalad waali ah gashay waxayna Stoke City markale la timid goolkeeda labaad ee ay markii labaad ku barbaraysay Chelsea waxaana markan Blues ka yaabsaday Peter Crouch kaas oo ka faa’iidaystay kubbad ay si fiican uga soo shaqeeyeen Mame Biram Diouf oo gool caawintan sameeyay iyo Bojan oo ciyaarta badal ku soo galay isla markaana saamayn deg deg ah sameeyay waxayna ciyaartu noqotay barbaro 2:2 ah. ka hor inta Willian uu mar kale shabaqa soo taaban daqiiqad ka dib oo uu ka dhigay 3-2 .
Diego Costa - oo soo laabtay ka dib markii uu ganaax ku maqnaa maalintii Boxing Day - ayaa goolka macsalaamada dhaliyay iyadoo ay harsantahay shan daqiiqo ee waqtiga caadiga ah islamarkaana Chelsea u diray sagaal dhibcood oo nadiif ah.
Kan-xigaPep Guardiola oo sheegay in Man City ...
Kan-hore1-0 Liverpool Manchester City, Georgi...
Late Night Show 20 04 2018
WARKA UNIVERSALTV 20 04 2018
horumarka laga gaaray dhameystirka wadada isku xirta magaalooyinka Gaalkacyo IYO Hobyo
31,968,107 unique visits